आइसोलेसनमा बसेको बेला मलाई ‘श्रद्धाञ्जलि’ लेख्नेहरुलाई कारवाही होस् : सुर्य थापा – Sandesh Press
आइसोलेसनमा बसेको बेला मलाई ‘श्रद्धाञ्जलि’ लेख्नेहरुलाई कारवाही होस् : सुर्य थापा
May 17, 2021 305
काठमाडौ । संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निकृष्ट ब्यवहार गरेका छन् । स्वास्थ्यलाभ लिइरहेका थापालाई केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकताएले श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गरेका थिए । आइसोलेनमा बसेको बेला ‘श्रद्धाञ्जलि दिने’ त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न थापाले माग गरेका छन्।
आइतवार उनले आफ्ना बारेमा लेखिएका नकारात्मक प्रतिकृयाको स्कृन सट सार्वजनिक गर्दै कडा कारवाहीको माग गरेका छन् । उनी दोस्रो पटक संक्रमित भएका हुन् । उनी १० दिन अघि पनि दोस्रो पटक संक्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका थिए।
सोमबार गराइएको अर्को परीक्षणमा भने उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । तर आफू आइसोलेसनमा बसेर अत्यन्त त ना वपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला समेत केहि व्यक्ति तथा समूहले दुष्ट नियतका साथ श्रद्धाञ्जलि दिने जस्ता निकृष्ट काम गरेको उनले बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका त्यस्ता पोस्टहरु समेत उनले सार्वजनिक गरेका छन्। केहि व्यक्तिहरुले असान्दर्भिक पोस्टहरुलाई फोटोसपमार्फत् तो ड मोड गरी गलत अफवाह फैलाएको समेत थापाले बताएका छन्।
‘त्यस्ता तत्वहरूलाई तथ्यको आधारमा प्रतिष्पर्धा एवं तर्कको सामना गर्न म चुनौति दिन चाहन्छु । साथै, साइवर कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कार्यरत राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी दोषीहरू उपर कडा कारबाही गर्न विशेष जोड दिन चाहन्छु,’ उनले सामाजिक सञ्जामा भनेका छन्।
‘म जिउँदो मान्छेलाई ‘रिप’ लेख्ने, श्रद्धाञ्जलि भन्ने र मृत्युको कामनासमेत गर्ने गरेको नीच व्यवहार मैले दुबै पटक भोगें,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्
Prevयिनै हुन् पर्दा पछाडिको हिरो जो सक्रंमितको शव नागों हातले उठाउन समेत पछि पदैनन् !
Nextमहाबिर पुनको चमत्कार अक्सिजन सिलिण्डरमा गरे नयाँ आबिस्कार (भिडियो सहित)
वीरगन्जमा ८ जनामा कालो ढुसी संक्रमण, ३ को मृ’त्यु
सोच्नै नसकिने गरि घट्यो प्याजको मुल्य !
प्रधानमन्त्रीका कारण यतिको जहाज आकासमा घुमेको घुम्यै